Qarax is-miidaamis ah oo gilgilay madaarka Adam Cade, Muqdisho; tobaneeyo qof oo ay ku jiraan 4 ka mid ah ciidanka AMISOM oo ku dhintay. – Radio Daljir
Qarax is-miidaamis ah oo gilgilay madaarka Adam Cade, Muqdisho; tobaneeyo qof oo ay ku jiraan 4 ka mid ah ciidanka AMISOM oo ku dhintay.
Muqdisho, Sept 09 – Qarax is-miidaamis ah ayaa gilgilay madaarka Adam Cade, Muqdisho. Inta la og yahay dhawr iyo toban qof ayaa ku dhintay qaraxa; 7 ka mid ah ayaa ah rayad iyo shaqaale halka 4 ka mid ahina ay yihiin ciidanka AMISOM ee ka hawlgala madaarka Muqdisho. Inkasta oo aanay cidina weli sheegan mas’uuliyada qaraxa ayaa hadana la tuhmayaa in uu yahay farsamada Al-shabaab & Xisbul Islam ee ka dagaalama Muqdisho iyo gobollada koonfureed ee Somaliya.
Waa qaraxii 2-aad ee ka dhaca Muqdisho isla bishan Ramadan, gaystana khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
2 usbuuc ka hor ayaa weeraro iyo qaraxyo lala beegsaday mid ka mid ah huteelada ku yaal magaalada Muqdusho ee ay deggan yihiin mudanayaal ka tirsan baarlamaanka deferaalka ah iyo saraakiil ciidan; ku dhawaan 40 qof ayaa ku dhinteen huteel Muna oo 6 ka mid ahi ay ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliya.
3-dii usbuuc ee la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka socday dagaallo kharaar oo u dhexeeya ciidamada dawlada federaalka ah iyo Al-shabaab & Xisbul Islam.
Dagaallada ayaa gaystay khasaare lixaad leh. Ku dhawaad 300 qof ayaa ku dhintay, halka in ka badan 500 oo qofna ay ka soo gaareen dhaawacyo.
Sida ay qortay hay’ada u qaabilsan QM qaxootiga ee UNHCR, waxaa ka barakacay hoygoodii in ka badan 22,000 qof oo badidoodu u haajireen dhinka Puntland, halka qaar kalena ay u haajireen xadka Kenya.